I-Semalt Expert icacisa i-A1 yeWebhusayithi yeWorld Scraper
I-website ye-Scraping ibandakanya ukuqokelela okanye ukuvuna ulwazi lwewebhusayithi kwindawo yokugcina indawo. Kuyakwazi ukukrazula idatha kwiziko kwaye ulondoloze kwindawo yendawo usebenzisa i-A1 website ye-URL. Unokudibanisa kwaye udibanise izinto ezahlukeneyo zewebhusayithi yolwazi ukwenza i-output data storage output. Ukongeza, unokwazi ukucoca ii-URL ukutshiza idatha kunye nokwenza i-CSV kunye neefayile ze-SQL. Ungayithumela le ngcaciso kwi-drive yendawo okanye uyigcine kwisiseko sedatha njengeSQL yolwazi.
Esi sikhokhelo se-SEO sineengcebiso ezibalulekileyo ekusebenziseni i-URL yewebhusayithi ikhupha ngempumelelo.
Ukuze uqalise, kufuneka ulande kwaye ufake ifayile ye-A1 yewebhusayithi ye-scraper. Le software isebenza kwiWindows OS njenge-Windows 10/8/7 / Vista / XP / 2008/2003 kunye neenkqubo ze-Mac OS njenge-macOS / OS X-Yosemite okanye entsha. Esi sixhobo:
Unokulinganisa ubukhulu befayile ye-6.09MB kuphela.
Inguqu 8.x ayifuni nayiphi na indleko yokubhaliselwa.
Kukho ixesha lokuvavanya ngokupheleleyo leentsuku ezingama-30 ukuvavanya ukusebenza kwalo.
Intengo: $ 0 yencwadana yamahhala kunye ne-$ 49 kwenguqu yobugcisa.
Kukho inkxaso yemveliso yamahhala ngaphambi nangemva kokuthenga..
Enye into epholileyo kunye newebhusayithi ye-A1 ye-URL yecraper yile nto yokuthenga ihlanganisa zonke iinguqulo ze-8.x phambili. Ukongezelela, abantu banakho ukuphucula kwi-9.x version nanini xa ikhutshwa ngaphambi kokuba i-1yr iphelile.
Ukukhipha idatha yewebhusayithi kunye ne-URL yewebhu (scraper)
I-scraper inokukwazi ukwenza imisebenzi eninzi inzuzo kwi-intanethi. Le mi sebenzi ifaka ukukranywa nokuqulunqa idatha kwiimithombo ezifana nezingosi zokuhamba, amahotele, amasheya kunye neempendulo zemozulu. Abantu banokukwazi ukudibanisa idatha yefayili echanekileyo yokuhlaziywa kwedatha yee-algorithms kunye nezixhobo. Abantu banakho ukuthabatha izinto ezivela kwenye iwebhusayithi kwaye bazigcine kwifom ehambelana nolwazi lwakho lwendalo.
I-URL yewebhusayithi i-scraper yi-spider web standard. Xa ukhawulela, unokukwazi ukwenza imisebenzi emininzi efana nokuhlunga ii-URL. Uyakwazi ukulawula isantya sokukhahlela ukuze ukwazi ukumbamba zonke iimfuno zakho ezibalulekileyo kubandakanya umthwalo webhusayithi.
I-A1 scraper ifaka iimpawu ezininzi eziqhelekileyo ezinokufanisa uhlobo lwedatha oyifunayo. Kukho izixhobo ezinomsebenzisi ezinokunceda ekuqinisekiseni indlela ilawulwa ngayo idatha. Unako ukukwazi ukudala impawu eziqhelekileyo ezifunekayo ngolwazi olufunayo.
Ekugqibeleni, i-website ye-A1 ye-URL ye-scraper inokwazi ukukhuphela ulwazi lwewebhu kwifom efunwayo. Kukho iifom ezininzi apho unokukwazi ukuthumela idatha ukusuka kwi-URL ecwecwe. Eyona nto, ungayifumana idatha kwifomu efana ne-CSV okanye iifayile ze-SQL. Ukuqwalasela ngokuzenzekelayo kunokwenzeka. Uyakwazi ukuseta ishedyuli yokuqhawulwa kwedatha yakho yokuqokelela. Ngesilingo samahhala seentsuku ezingama-30, unako ukulungelelanisa ukuchithwa kwedatha kumawebhusayithi afana neewebhusayithi zeendaba.